Wakiilo ka socda Hay’adaha Dowladda FS iyo Bulshada Rayidka oo Tababar loogu qabtay Kenya | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wakiilo ka socda Hay’adaha Dowladda FS iyo Bulshada Rayidka oo Tababar loogu...
Wakiilo ka socda Hay’adaha Dowladda FS iyo Bulshada Rayidka oo Tababar loogu qabtay Kenya
Mumbasa(SNTV) Tababarkan oo loo qabtay wakiilo ka kala socoda hay’adaha kaladuwan ee Dowladda Soomaaliya iyo Ururada bulshada Rayidka ayaa lagu qabtay magaalada Mombasa ee dalka Kenya,si aqoontooda maamuleed sare loogu qaado.
Waxaa tababarkan ka qeyb galaya ilaa 30 qof oo ka kala socoday hay’adaha Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wakiilo ka socda ururada bulshada Rayidka Soomaaliyeed,waxaana lagu baranayay dib uga kabashada musiibooyinka iyo sida loo maareynkaro intuba.
Qaban qaabada tababarkan ayaa waxaa lahaa Urur Goboleedka IGAD oo ugu talagalay in loogu faa’ideeyo bulshada Soomaaliyeed fahanka dhibaatooyinka ka dhalan kara musiibooyinka dabiiciga iyo iyo sida loo maareeyo,iyadoo dadkii ka qeybgalayna looga fadhiyo in waxyaabihii ay ka faa’ideysteen ay ugu adeegaan bulshada.
Tababarkaan ayaa ku soo beegmaya xili ay Soomaaliya ka dhaceen daad iyo fatahaad ay sameeyeen webiyada Jubba iyo Shabeelle oo saameyn naf iyo maal ah ku yeelatay dadka iyo duunyadda.
Previous articleCiidamada Xasilinta Caasimadda oo gacanta ku dhigeen Rag hubeysan
Next articleSarkaal ka socda Kuuriyada Waqooyi oo Mareykanka kula kulmay Mike Pompeo